Maxkamadda Ciidamada qalabka ee Soomaaliya oo Xukunno ku Riday Eedaysanayaal – WARSOOR
Maxkamadda Ciidamada qalabka ee Soomaaliya oo Xukunno ku Riday Eedaysanayaal
Muqdisho – (warsoor) – Maxkamadda Ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa saaka xukuno kala duwan ku riday eedaysanayaal loo haystay Qaraxii 14 October ka dhacay Isgoyska Zoobe ee Magaalada Muqdisho.
Maxkamadda ayaa eedaysanayaasha ku kala xukuntay Toogasho,xabsi daa,in kuwo kale oo amar ay ku bixisay in xuriyadooda dib loo siiyo maadaama lagu waayay dambiyadii loo haystay.
Guddoomiyaha Maxkamadda Darajada 1-aad ee Ciidamada Qalabka sida G/sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaa warbaahinta u aqriyay xukunka, waxaana eedeysanayaasha lagu kala xukumay:-
1- Xasan Aadan Isaaq Cali waxay maxkamaddu ku xukuntay Dil Toogasho .
2- C/laahi Ibraahin Xasan Absuge (Maqane) waxay maxkamaddu ku xukuntay Xabsi Daa,in.
3- C/wali Axmed Diiriye waxay maxkamaddu ku xukuntay 3(sedax) sano xabsi ciidan ah.
Sidoo kale waxay maxkamaddu amraysaa in xabsiga laga siidaayo eedeysanayaal:
1- Muqtaar Max’ud Xasan Rooble .
2- Cabdul Cabdi Warsame Cali
Hore ayeey Maxkamadda u dhageystay ilaa 2-jeer kiiskan oo saacada badan qaatay, waxaana ugu dambeyn maanta lagu dhawaaqay go’aanka Maxkamadda iyadoo Maxkamadda fursad kale hor dhigtay eedeysanayaasha oo ay rafcaan ku qaadan karaaan.
Wasaaradda Boostada & Isgaadhsiinta Soomaaliya oo qabanqaabineysa shirweynaha Isgaadhsiinta Soomaaliya iyo Jabuuti
Wafdi ka socda Qaramada Midoobay oo Booqday Magaaladda Dhuusamareeb ee Gobolka Galgaduud